Mmụta ọmụmụ anyị - atụgharị uche
Mmụta ọmụmụ anyị
Here nọ ebe a: Home » Mmụta ọmụmụ anyị
Usoro mmụta asynchronous bụ usoro ọmụmụ ị nwere ike iso na ntanetị na-enweghị oke oge. Ha nwere nkuzi edekọrọ edekọtara n'ụdị modulu ma na-emelite oge niile. Mgbe ịzụrụ akwụkwọ ahụ, vidiyo niile esoro ga-ebipụta agaghị adị nkwụ ụgwọ ọ bụla. Usoro asynchronous anaghị arụ ọrụ: inwere ike izuta ha mgbe ichoro ma mezue ya mgbe ichoro.
Ntughari nke ogugu
Titolo: Nkwalite mmụta
Quando: odikwa oge niile
Prọfesọ: dr. Antonio Milanese
Ọnụ: Euro 65
oge: Ihe kariri elekere asatọ
Ihe ndị mpụga: Ivano Anemone (Dyslexia na ndị isi ọrụ), Gabriele Bianco (SLD na asụsụ abụọ), Margherita Colacino (Ọgụgụ na igwu egwu), Francesco Petriglia (Ọgụgụ na ọhụụ), Imma Squicciarini (Usoro nnabata site na telemes ruo abụ),
Njikọ na usoro ihe omume ahụ: Gaa n'okporo ụzọ ahụ
Titolo: Tupu ịmalite: Atụmatụ maka Ọgwụgwọ Okwu Okwu Ọdịnihu
Ihe ndị mpụga: -